Ny Bokin’ i Jakôba Rahalahin’ i Nefia
Ny teny notoriany tamin’ ny rahalahiny. Nampangaihay ny lehilahy iray izay nikatsaka ny handrodana ny fotopampianaran’ i Kristy izy. Teny vitsivitsy momba ny tantaran’ ny vahoakan’ i Nefia.
Nikatsaka ny handresy lahatra ny olona mba hino an’ i Kristy sy hitandrina ny didiny i Jakôba sy i Jôsefa—Nodimandry i Nefia—Nahazo vahana teo anivon’ ny Nefita ny faharatsiana. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.
Niampanga ny fitiavan-karena, ny avonavona ary ny tsy fahadiovam-pitondrantena i Jakôba—Nahazo nikatsaka harena ny olona mba hanampy ny olona namany—Nomelohin’ i Jakôba ny fanambadiana olo-maro tsy nahazoana làlana—Finaritra amin’ ny fahadiovam-pitondrantenan’ ny vehivavy ny Tompo. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.
Nandray ny teny mahafinaritra izay an’ Andriamanitra ny madio am-po—Nihoatra ny an’ ny Nefita ny fahamarinan’ ny Lamanita—Nampitandrina tamin’ ny fijangajangana, ny faharatsiam-pitondran-tena ary ny fahotana rehetra i Jakôba. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.
Nidera ny Ray tamin’ ny anaran’ i Kristy ny mpaminany rehetra—Ny fanateran’ i Abrahama an’ i Isaka dia tandidon’ Andriamanitra sy ny Zanany Lahitokana—Tokony hihavana amin’ Andriamanitra ny olona amin’ ny alalan’ ny sorompanavotana—Hotsipahin’ ny Jiosy ny vato fehizoro. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.
Nitatitra ny tenin’ i Zenosa mikasika ny fanoharana ny amin’ ny hazo oliva voakolokolo sy ny hazo oliva dia i Jakôba—Ireo dia fifanahafana eo amin’ i Isiraely sy ny Jentilisa—Voasoritra mialoha ny fielezana sy ny fanangonana an’ i Isiraely—Voatsiahy amin’ izany ny Nefita sy ny Lamanita ary ny mpianakavin’ i Isiraely rehetra—Hatao grefy amin’ i Isiraely ny Jentilisa—Hodorana ny tanimboly amin’ ny farany. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.
Hampody ny Isiraely ny Tompo amin’ ny andro farany—Hodorana amin’ ny afo izao tontolo izao—Tsy maintsy manara-dia an’ i Kristy ny olona mba hisorohana ny farihy afo sy solifara. Tokony ho 544–521 talohan’ i J.K.
1 I Serema dia nandà an’ i Kristy, nifanditra tamin’ i Jakôba, nitaky famantarana, ary nofaizin’ Andriamanitra—Efa nilaza ny amin’ i Kristy sy ny sorompanavotany ny mpaminany rehetra—Nandany ny androny toy ny mpirenireny ny Nefita, nateraka tao amin’ ny fahasahiranana izy ary nankahalain’ ny Lamanita. Tokony ho 544–421 talohan’ i J.K.